SoftwareDistributors.co - မာလ်တီအမှတ်တံဆိပ်၏ Authorized Partner
လိုင်စင် Key ကို
ပြန် & ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ
€0.000ပစ္စည်းများ
ငွေကြေး	 AED: အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု dirham (د.إ) AMD ၏: Armenian အဘိဓါန် DRAM (AMD ၏) ARS: အာဂျင်တီးနားပီဆို ($) AUD: သြစတြေးလျဒေါ်လာ ($) BDT: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် taka (৳) BRL: ဘရာဇီးအစစ်အမှန် (R $) CAD: ကနေဒါဒေါ်လာ ($) CHF: ဆွစ်ဇာလန်ပြင်သစ်က (CHF) CLP: ချီလီပီဆို ($) CNY: တရုတ်ယွမ် (¥) ရဲ: ကိုလံဘီယာပီဆို ($) DKK: ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ (DKK) EGP: အီဂျစ်ပေါင် (EGP) EUR: ယူရို (€) GBP: ပေါင်စတာလင် (£) gel: ဂျြောဂြီယနျ lari (₾) HKD: ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ($) IDR: အင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ (RP) IRR: အီရန် rial (﷼) JPY: ဂျပန်ယန်း (¥) KPW: မြောက်ကိုရီးယား (₩) အနိုင်ရ ဝမ်: တောင်ကိုရီးယား (₩) အနိုင်ရ KWD: ကူဝိတ် dinar (د.ك) LKR: သီရိလင်္ကာရူပီး (රු) MVR: Maldivian rufiyaa (.ރ) MXN: မက္ကဆီကန်ပီဆို ($) MYR: မလေးရှားရင်းဂစ် (RM) NOK: နော်ဝေခရိုနာ (Kr) NZD: နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ ($) OMR: ကလည်းအိုမန် rial ( ر.ع. ) PEN: Sol (S /) PHP ကို: ဖိလစ်ပိုင်ပီဆို (₱) PLN: ပိုလန်złoty (ZL) QAR: ကာတာ riyal (ر.ق) RON: ရိုမေးနီးယား leu (Lei) RUB: ရုရှရူဘယ် (₽) SAR: ဆော်ဒီ riyal (ر.س) စမ်းကြည့်ပါ: တူရကီလိုင်ရာ (₺) TWD: နယူးထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ (NT $) uah: ယူကရိန်း hryvnia (₴) အမေရိကန်ဒေါ်လာ: ယူနိုက်တက်စတိတ် (ယူအက်စ်) ဒေါ်လာ ($) VND: ဗီယက်နမ်đồng (₫) Zar: တောင်အာဖရိကကျပန်း (R)
အယ်ဒီတာများ & converter
ပိုက်ဆံ Back ကိုအာမခံ
ပံ့ပိုးမှု7နေ့ရက်များတစ်အပတ်
Windows ကို 8.1 Pro ကို 32 / 64 Bit
Windows ကို7Professional က 32 / 64 Bit
Windows ကို7Home Premium 32 / 64 Bit
Windows ကို 10 Professional က 32 / 64 Bit
Windows ကို 10 မူလစာမျက်နှာ 32 / 64 Bit
Windows အတွက် Microsoft Outlook 2019 - 1 PC ကို
Windows အတွက် Microsoft Outlook 2016 - 1 PC ကို
Windows အတွက် Microsoft Office Professional က Plus အား 2019 - 1 PC ကို
Windows အတွက် Microsoft Office Professional က Plus အား 2016 - 1 PC ကို
Windows အတွက် Microsoft Office Home နဲ့ Student 2019 - 1 PC ကို
Mac အတွက် Microsoft Office ကိုနေအိမ် & စီးပွားရေး 2019 - 1 Mac အတွက်
Windows အတွက် Microsoft Office Home နဲ့ Student 2016 - 1 PC ကို
updated Keep & Unlimited လျှော့ Get
SoftwareDistributors.co Multi အမှတ်တံဆိပ်၏ Partner Authorized
­ ­[အီးမေးလျ protected]
© SoftwareDistributors.co Multi အမှတ်တံဆိပ် 2019 ၏ Partner Authorized
Register | သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့?
လော့ဂ်အင် | Register